FAQs - Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Inona no karazana vokatra magnetika azontsika avy amin'ny Meiko Magnetics?
Meiko Magneticsdia mpanamboatra sy mpanondrana vokatra matihanina any Sina. Ny vokatray dia miainga avy amin'ny andriamby neodymium bared ka hatramin'ny fivondronana andriamby mifandraika amin'ny endrika, asa ary fampiharana isan-karazany. Maherin'ny 2000 ny karazana andriamby andriamby dia tsy voatery.
Ahoana ny kalitaon'ny andriamby anao?
Miezaka izahay mba hanolotra vokatra maoderina mahay indrindra FANANTENANA herintaona, tsy manilika ireo mpanimba artifisialy sy fahasimbana. Izahay dia manome antoka ny fitaovanay sy ny fahaizanay miasa. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny andriamby andriamby. Amin'ny fiantohana na tsia, kolontsain'ny orinasanay ny miresaka sy hamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra hahitan'ny tsirairay fahafaham-po.
Ny vidin-tsika dia azo ovaina arakaraka ny famatsiana sy ny tsena hafa. Saingy satria avy amina vokatra azo avy amin'ny mpamokatra vokatra mpamokatra herinaratra miorina any Shina isika dia afaka manolotra vidiny mifaninana amin'ny fihenam-bidy.
Eny, takianay ny kaomandy iraisam-pirenena rehetra mba hanana fatra farafahakeliny mitaky farafahakeliny. Fa raha entana habe mahazatra amin'ny stock, tsy misy MOQ ho an'ny filaminana voalohany. Raha mila fanazavana fanampiny, azafady mba ampio hifandray aminay.
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy izahay, ao anatin'izany ny Tatitry ny fitsapana, ny taratasim-panadihadiana / mifanaraka, ny fiantohana, ny fiandohana ary ny antontan-taratasy fanondranana hafa takiana.
Matetika ao anatin'ny 7-15 andro ho an'ny fandefasana. Raha amin'ny entana mahazatra dia afaka mamonjy azy ireo isika ao anatin'ny 3 andro. Ho an'ny santionany vaovao dia manodidina ny 7 andro ny fotoana itarihana. Ho an'ny famokarana betsaka, ny mitarika fotoana dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Ny fotoana itarihana dia nanjary nahomby rehefa (1) nahazo ny petra-bolanao izahay ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay, azafady mba andefaso ny takiana amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.